Archive du 20190307
Sendikan’ny JIRAMA Hanapaka jiro sy rano…
Tapaka tanteraka ny fifampiresahana, hoy ireo sendikan’ny JIRAMA tetsy amin’ny Hotely Ny Railovy Analakely.
Ampamoakan’ny tambajotran-tserasera Afa-baraka indray Rajoelina sy ny ekipany
Niparitaka sy niteraka resabe tany anaty tambajotran-tserasera omaly ny karazana ampamoaka nataona olona nilaza fa nanohana sy nampandany an-dRajoelina tamin’ny fifidianana filoha.
Razana nipetraka tao an-trano 10 taona taty aoriana vao hita
Nahitana razana efa maty ela tany amin'ny kaominina Tatamalaza Fandriana.
Lalao Ravalomanana Tena niasa ary ho tohanana, hoy ny vondrona eoropeanina
Hanampy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna amin’ny ankapobeny ny Vondrona Eoropeanina. Io no resaka nandritry ny fitsidihana ara-pomba fifanajana ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana,
Trafikana tovovavy Malagasy Ampivadiana amin’ny Sinoa ireo hamidy
Soratana am-panambadiana amin’ny teratany Sinoa lahy ireo tovovavy Malagasy. Io no fomba entina hamoahana ireo tovovavy hamidy any ivelany miala eto Madagasikara.
Kianja Bonne Chance 4 Anosizato Naaton’ny fanjakana ny fanorenana trano eo amboniny
Nanao fanambarana am-pahibemaso ny fikambanana Hafari Malagasy izay nilaza fa : « Faly tanteraka ry zareo fa na dia sorona aza ny filohany Rafanomezantsoa Jean Nirina noho ny fitariany niaraka tamin’ireo komity ny
Edito Velaro ny sehatra !
Raha ny zava-misy hita soritra hatreto dia mbola ho ela mihitsy raha hisy vao hisy izany atao hoe fampandrosoana miainga amin’ny vina sy ny fampanantenana nataon’izao fitondrana izao marina eto.
Lalam-pirenena faha-44 Ho tapaka tanteraka
Tahaka ireo lalana maro manerana ny Nosy, dia mampikolay ny mpandeha sy ny mpitatitra ny faharatsian’ny lalam-pirenena faha-44 mampitohy an’i Moramanga amin’Ambatondrazaka.
Fitohanan’ny fiarakodia lavareny Betsaka ireo orinasa efa mandray fepetra
Mihamahazo vahana hatrany ny fitohanan’ny fiarakodia eto amintsika. Tsy misy toerana izay tsy ahitana izany intsony, antony mampitaraina fatratra ireo mpiasa sy mpianatra, indrindra ireo miainga avy any amin’ny toerana lavitra toa an’i Itaosy na Ambohitrarahaba.
Olana eny amin’ny oniversite Kianin’ny mpianatra tranainy ny fametrahana ny LMD
Ny fitakian’ny mpianatry ny oniversite amin’izao dia vary mangatsiaka tohin’ny fametrahana ny rafitra LMD nanomboka ny taona 2012, hoy ny mpitarika ny tolon’ny mpianatra tamin’izany, Berija Ravelomanantsoa.
Mpampianatra mpikaroka eny Ankatso Nampitandrina ny fanjakana
Nanatanteraka fivoriana teny Ankatso indray ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka (SECES) omaly alarobia 06 martsa.
INFP Mahamasina Nizarana sakafo maimaimpoana ireo traboina
Nizarana sakafo maimaimpoana ireo olona traboina voatery nalana tamin’ny tranony teny Ampamarinana, vokatry ny fianjeran’ny vatobe. Miisa 81 izy ireo ka 24 amin'ireo dia ankizy avokoa.
Fizahantany Ny Alemana no mandany vola indrindra
Mandray anjara amin`ilay hetsika iraisam-pirenena momba ny fizahantany (ITB) ao Berlin ny mpandraharaha malagasy sy ny ofisim-pirenena misahana ny fizahantany (ONTM).
Vary avy any Pakistan Manjaka ny kolikoly, poizinina ny Malagasy
CAN Egypte 2019 Sedra goavana ho an’ny baolina kitra Malagasy
Sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Malagasy hatramin’izay niforonan’ny federasiona nasionaliny tamin’ny 1961 sy naha mpikambana azy tao amin’ny FIFA « Federasiona Iraisam-piren’ny Baolina kitra maneran-tany »
Fampandrosoana ny firenena Miditra an-tsehatra ny “Empowermen Madagascar”
Fikambanana hivondronana lehilahy mbola mpianatra ny “Empowermen Madagascar”. Manatanteraka hetsika etsy amin’ny Infp Mahamasina izy ireo nanomboka omaly haharitra folo andro.
Mahereza sy Fiadanana Ambohidratrimo Naato ny fitrandrahan’ny Sinoa
Tonga tao amin’ny kaominina Ambanivohitra Mahereza sy Fiadanana ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo ny avy eo anivon’ny polisy misahana ny harena ankibon’ny tany na « police des mines » sy ireo mpiara-miasa aminy na ny « commandant de compagnie » mba hizaha ny fitrandrahana mitranga marina ao an-toerana.
Teknolojia vaovao Hanamora ny fikirakirana informatika ny orinasa DEVEA
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny talata 05 martsa lasa teo ny fampahafantarana ny masoivoho faha-9 an’ny orinasa DEVEA izay misehatra amin’ny tontolon’ny Informatika miasa aty amin’ny faritry ny Afrika miteny frantsay.